मलाई समीक्षा गर्नुहोस्! डलर को लागी ब्लगिंग | Martech Zone
मलाई समीक्षा गर्नुहोस्! डलर को लागी ब्लगिंग
शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
प्रायोजित पोष्ट: समिक्षा गर्नुहोस्
जब PayPerPost र ReviewMe पहिलो पप अप भयो, म धेरै निराश थिएँ। मलाई 'डलरका लागि ब्लगि' 'सबैभन्दा नराम्रो लाग्यो। आज रात मैले अन्य ब्लगमा केहि पोष्टहरू देखें जुन समीक्षा मेरो आफ्नै प्रणालीको प्रयोग गरीरहेको छु ब्लगर्सलाई आफैं समीक्षा गर्न। यसले मेरो ध्यान आकर्षण गर्‍यो त्यसैले मैले यसलाई जाँच गर्न साइन अप गरें।
यो एक चाखलाग्दो अवधारणा हो। तपाईंको ब्लगको एक्सपोजर (अलेक्सा, टेक्नोराटी, आरएसएस, आदि) मा आधारित, तपाईंको ब्लग एक डलर राशि को साथ प्रदान गरिएको छ कि तपाईं एक समीक्षा पूरा जब तपाईं भुक्तान हुनेछ। अर्को शब्दहरुमा, तपाईलाइ तपाईको ब्लग पढ्ने व्यक्तिको संख्यामा आधारित क्षतिपूर्ति दिइयो। नराम्रो विचार होईन। मलाई लाग्छ कि यो विज्ञापनदाताहरु को लागी एक राम्रो तरीका हो। त्यसमा बढी ...
समीक्षा मलाई आवश्यक छैन कि तपाई सकारात्मक समीक्षा लेख्नुहोस्! अर्को शब्दहरुमा, तपाइँ बिल्कुल इमानदार हुन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि यसले विज्ञापनलाई महान उत्पादनको साथ आकर्षित गर्दछ, तर समीक्षा मी अनियन्त्रित विज्ञापनदाताहरुलाई टाढा जाँदैछ। हे! त्यो हामी दुबैका लागि राम्रो छ, होइन र? मैले गर्न चाहेको अन्तिम कुरा भनेको केहि व्यक्तिलाई पैसा कमाउने प्रयास गर्नको लागि मेरो ब्लग पढ्ने मान्छेहरूको लागि पेन्डर हो। त्यसले मेरो पाठकहरूलाई जोखिममा पार्नेछ र त्यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले निर्माण गर्ने प्रयासमा धेरै समय राखेको छु। मसँग ठूलो नाम वा अरबौं डलर छैन, त्यसैले म सानो-समय हुँ। मानिसहरू ठूला केटाहरू तर्फ गुरुत्वाकर्षण गर्छन्।
मैले प्रशंसा गरेको अर्को कुरा त्यो हो चाहनुहुन्छ तपाइँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ कि यो एक ब्लग पोष्ट हो जुन तपाइँलाई क्षतिपूर्ति दिइयो:
तपाईंले खुलासा गर्नुपर्दछ कि पोष्ट एक तरीकाले सशुल्क पोष्ट हो। यहाँ केहि विचारहरू छन्: "प्रायोजित पोष्ट:", "निम्न भुक्तान गरिएको समीक्षा हो:" "विज्ञापन:"।
त्यसोभए व्यापारको दृष्टिकोणबाट, म समीक्षाको मेरो सेवालाई आदर गर्दछु र उनीहरूलाई शुभकामना दिन्छु! त्यहाँ समयहरू छन् कि मलाई पोस्ट गर्न को लागी विचार गर्न को लागी समस्या हो, तर म चट्टान र कडा ठाउँका बीचमा अडिग छु। यदि मैले दैनिक पोष्ट गरेन भने, म तलको ट्राफिकमा प्रवृति देख्छु। यदि म दैनिक पोष्ट गर्छु भने, म ट्राफिकमा माथिल्तिर घुमेको देख्छु। सामग्री मेरो ब्लगको साथ राजा हो। के म गर्न चाहन्न तपाईंको यहाँ समय बर्बाद गर्नु हो, यद्यपि। त्यसोभए, मैले केहि दिनहरूमा पोष्टहरू बिर्सें जुन मेरो कुराकानीमा थप्न कुनै रचनात्मक थिएन।
म केहि बेर समीक्षाका लागि प्रयास गर्दैछु ... राजस्वको स्रोतको रूपमा होइन, तर म यसले 'voids' भर्न सक्दछ कि भनेर हेर्न जाँदैछु जहाँ मैले केहि पोष्ट गर्नुपर्ला तर पर्याप्त छैन। म तपाईहरूसँग पनि इमान्दार हुनेछु, र तपाईलाई के हुँदैछ जान्न दिनुहोस्। म हाम्रो सम्बन्ध जोखिममा राख्न चाहन्न!
सेवा को रूप मा, यो धेरै सीधा अगाडि छ। मैले भन्न खोज्नुपर्दछ कि साइट नरकको रूपमा भ्रामक छ, यद्यपि! त्यहाँ एक विज्ञापनदाता खण्ड र एक ब्लगर खण्ड छ। लाइनमा कुन साइडमा हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन यो एकदम सरल छ, तर साइट वास्तवमै त्यस तरीकाले सेट अप गरिएको छैन। त्यहाँ एक तेर्सो मेनू, बायाँ मेनू, त्यसपछि सामग्री क्षेत्र भित्र विकल्पहरू, फुटर मेनू ...। मलाई अझै पनी याद छ कि म त्यहाँ कतै आफ्नो श्रेणी देख्दै छु तर म त्यहाँ कसरी फर्कन सक्दिनँ !!
त्यसो ... महान उत्पादन, घटिया उपयोगिता। मेरो सल्लाह समीक्षामा भएका मानिसहरूका लागि विज्ञापनदाताहरू वा ब्लगरहरूले साइट मार्फत लिने सबै व्यवसाय प्रक्रियाहरू नक्शा बनाउन सक्छन् ... दर्ता, ब्लग थप्दै, समीक्षा थप गर्ने, भुक्तानी सेट गर्ने, आदि र त्यस वरिपरिको इन्टरफेस डिजाइन गर्ने। पदानुक्रम र व्यापार प्रक्रियाहरू। मलाई लाग्छ कि म विज्ञापनदाता र ब्लगर पृष्ठहरू र प्रक्रियाहरू बीच एक ठूलो भेद छु। एक अर्का माथि बटनहरू हुनु अलि अनौंठो हो र सहज हुँदैन।
खैर, यो छ! यो समीक्षामा मेरो पहिलो समीक्षा हो ... समीक्षामा मेरो! आशा छ तपाईंले मेरो क्यान्डरको कदर गर्नुभयो।
किन महान् कर्मचारीहरू छोडछन्? किन ठूला कम्पनिहरु अझै भर्ती गर्नु पर्छ?
डिसेम्बर १, २०१ 1 2006:२:1 अपराह्न
अनुगमन: मैले यस प्रविष्टिको लागि आज Paypal मार्फत भुक्तानी प्राप्त गरें।